Airlinesgbọ elu Ukraine: Onye ọka iwu na-eme ihe na-ekwu okwu eTurboNews
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Airlinesgbọ elu Ukraine: Onye ọka iwu na-eme ihe na-ekwu okwu eTurboNews
Airlines • Airport • Austria na -agbasa ozi ọma • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Editorial • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akụkọ dị iche iche
A na-agba akwụkwọ ikpe gbasara klas megide ụgbọ elu ndị Ukraine na ndị ọzọ na Canada mgbe e gbusịrị ndị njem 176 na PF752 karịrị Iran. Onye kpatara ya? Nye ga-akwụ ụgwọ?
The Gọọmentị Iran, Ukraine International Airlines, Linegbọelu Austrians, Lufthansa, Turkish Airlines, Qatar Airways, Aeroflot, na / ma ọ bụ na Gọọmentị US. Detuo ụgwọ maka ezinụlọ nke ndị njem ụgbọ elu nwere ike ịbụ ụgwọ.
Maazị Tom Arndt at Himelfarb Proszanski ụlọ ọrụ iwu na Toronto, Canada, na-ekwurịta okwu eTurboNewonye nkwusa Juergen Steinmetz taa. Maazị Arndt bụ otu n'ime ndị ọka iwu na-arụ ọrụ ikpe klas nke Canada ka a gbaa akwụkwọ na Toronto maka ndị metụtara ụgbọ elu ndị Ukraine gbara ụgbọ elu gbagburu Tehran, Iran.
Maazị Arndt chịkọtara okwu ndị dị n'aka eTurboNews:
Flight PS752 ekwesịghị ịpụ. Ọ bụ naanị awa 4 ka Iran gbasịrị mgbọ na ọdụ US na Iraq.
Iran kwadebere kpamkpam maka mmegwara US na agha zuru oke.
Ndị ọrụ ụgbọelu na ndị ụgbọelu kwesịrị ịmachibido ụgbọ elu niile.
Anyị ebidola klas a iji weta ezinaụlọ ndị nsogbu a jọgburu onwe ya metụtara ikpe ziri ezi na ịkwụ ụgwọ.
Anyị na-atụ anya na Iran na ụgbọ elu ndị Ukraine ga-akwụ ndị ezinụlọ ahụ ụgwọ maka mfu ha. Anyị enweghị ike ịkpọghachite ndị njem ahụ, ọ dị anyị ka ya bụrụ na anyị nwere ike. Mụnna nwoke, ụmụnne nwanyị, ndị nne, ụmụ nwanyị, nna, ụmụ nwoke na ụmụnne nwanne alọghachighị. Ikpe a bụ ihe anyị nwere ike ime iji chọọ ikpe ziri ezi na ịkwụ ụgwọ maka mfu ha.
Anyị chọrọ ka nweta ikpe ziri ezi na ịkwụ ụgwọ maka ndị njem na ezinụlọ ha.
Iran kwetara na ọ gbara ụgbọ elu ahụ. Nke ahụ bụ nzọụkwụ mbụ siri ike. Airgbọ elu ndị Ukraine akabeghị ọrụ. Anyị bu n'obi ịrụ ọrụ site na ụlọ ikpe iji chọọ ikpe ziri ezi na ịkwụ ụgwọ maka ezinụlọ. Ọtụtụ ndị ezigbo mmadụ na ezigbo mmadụ gburugburu ụwa amalitela usoro ahụ.
Chee echiche ihe dị na ụgbọ elu ahụ. E kpochapụrụ ya niile.
Anyị enweghị ike ịkpọghachite ndị ahụ.
Ihe anyị nwere ike ime, bụ ime ka ikpe ziri ezi na ịkwụ ụgwọ maka ezinụlọ ha na ndị ha hụrụ n'anya. Nke a bụ oge anyị iji nyere aka. Nke a bụ otu anyị nwere ike isi nye aka.
Tom Arndt kwuru, sị: "Anyị ga-aga n'ihu ndị ọchịchị Iran, ndị Alakụba Revolutionary Guard Corps, na Ukraine International Airlines na nke a nke klas-edinam ikpe anyị na-atụ aro itinye akwụkwọ ebe a na Canada."
“Ọtụtụ ndị dọkịta na-eto eto, ụmụ akwụkwọ ahụike nwere nnukwu nrọ, na ezinụlọ lara n’iyi na Jenụwarị 8, 2019, mgbe ha si Iran gaa Ukraine na Canada. Ọ bụghị banyere ego ahụ, kama anyị chọrọ iwetara ezinụlọ ndị o metụtara ikpe ziri ezi. ”
Himelfarb Proszanski bụ ụlọ ọrụ iwu na-asọpụrụ nke ukwuu na Toronto ma lekwasị anya n'inyere ndị ahịa aka iche okwu ndị dị mkpa ihu. Ndabere na 1998 site n'aka Peter Proszanski na David Himelfarb, ụlọ ọrụ ahụ na-etinye uche n'ọtụtụ akụkụ iwu gụnyere ụlọ ọrụ, azụmahịa, aha, ịgba akwụkwọ azụmahịa, njikọta na nnweta, enweghị ego, ezigbo ụlọ, na iwu mkpuchi.
Maazị Arndt kwuru, sị: “Ugbo elu Ukraine ụgbọ elu PS752 si na Teheran Airport pụọ n’abalị asatọ nke ọnwa Jenụwarị n’ọdụ ụgbọ mmiri gaa Kiev. Aircraftgbọ elu ahụ soro ụzọ ụgbọ elu ụgbọelu ha kpebiri tupu ha ekpebie. Pathzọ a weghaara ha ngwa ngwa ngwa agha.
N'ime ndị nwụrụ anwụ bụ ndị njem 138 na-alaghachi Canada, gụnyere ụmụ amaala Canada 57. na ụmụ amaala na-abụghị ndị Canada nọ n'ụgbọ elu a gụrụ ụmụ akwụkwọ, ndị dọkịta, na ndị njem azụmahịa na-alaghachi Canada.
Iran n'ikpeazụ kwetara na usoro nchebe ngwa ọgụ ya gbagburu ụgbọelu ahụ mgbe o bosịrị ụta maka njehie ma ọ bụ mmezi ọrụ. Onye isi ala Iran Hassan Rouhani kwuru na ọ bụ “ihie ụzọ nke na-enweghị mgbaghara.”
Tom Arndt kwetara na eTurboNews ọ bụ ihe kachasị mma maka Iran iji kweta mmejọ ha, ọ bụ ugbu a ka ụgbọ elu ndị Ukraine gbagoo na efere ahụ ịnakwere na ikwe ka ụgbọ elu ha pụọ ​​bụ nnukwu ndudue.
Prime Minista Canada Justin Trudeau kwuru, sị, "otinggbapụ ala ụgbọ elu ndị nkịtị bụ ihe jọgburu onwe ya… Iran aghaghi ibu oru zuru oke… Anyị na-atụ anya ya Iran iji kwụọ ezinụlọ ndị ahụ ụgwọ. ” Ndị ọrụ Ukraine kwuru nke ahụ Iran kwesịrị ikwughachi ezinụlọ ndị e merụrụ ahụ.
N'oge ihe mberede ahụ, US Federal Aviation Administration machibidoro ụgbọ elu ndị nkịtị ifefe mpaghara ahụ. Mgbe ọdịda nke Malaysian Airlines Flight 17 na 2014, ọtụtụ ụgbọ elu na-asọpụrụ ọkwa FAA mgbe ha na-eme mkpebi nchekwa. Ọtụtụ ụgbọ elu, gụnyere Air France, Air India, Singapore Airlines, na KLM, gbanwee ụgbọ elu ha. Airgbọ elu ndị ọzọ dịka Emirates na Flydubai kagburu ụgbọ elu niile na Iran.
eTurboNews n'isiokwu bu ụzọ kwuru na Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Qatar Airways, na Aeroflot kwesịrị ịkekọrịta nzaghachiy na Ukraine International Airlines na ọchịchị Iran ma were ọrụ maka ọdachi a jọgburu onwe ya.
eTN kwuru na isiokwu ahụ: Ukraine International Airlines nwere ike ịgbaso ihe atụ nke ndị ọzọ na-ebu mba gụnyere Lufthansa, Austrian Airlines, Aeroflot, Qatar Airways, na Turkish Airlines nke leghaara ịdọ aka ná ntị FAA anya wee gaa n'ihu n'ọrụ ha n'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị doro anya na enweghị atụ site na FAA. Gbọelu Austrian Airlines, Qatar Airways na Aeroflot rụrụ ọrụ otu ụbọchị ka ihe ọghọm ahụ kpatara ọnwụ.
eTurboNews ama obụp ntak ụgbọ elu nọgidere na-efe ma depụta data na-edekọ ụgbọ elu ndị ọrụ ụgbọelu na-arụ ọrụ n'agbanyeghị nsogbu doro anya.
Mgbe a jụrụ gị eTurboNews Ọ bụrụ na enwere ike ịgbatị klas a na ụgbọ elu ndị ọzọ, Maazị Arndt kwuru, "Anyị ka nọ na mbido mbụ ma na-enyocha ụzọ niile iji nweta ikpe ziri ezi maka ezinụlọ ndị metụtara."
eTurboNews jụrụ onye ga-akwụ ụgwọ maka ikpe ahụ. Maazị Arndt zaghachiri, sị: “Enweghị ego dị ukwuu n'akpa uwe maka ezinụlọ ndị ahụ. O kwukwara na New York-mbụ ịgba akwụkwọ gbasara ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịgba akwụkwọ, Galactic Litigation Partners LLC, ekwenyela, dabere na nnabata ụlọ ikpe, ịkwụ ụgwọ klaasị megide gọọmentị Iran na Ukraine International Airlines. ”
Na-aga mgbe gọọmentị US maka ịmalite mmeghachi omume nke ihe omume? eTN jụrụ. Tom Arndt si Nzaghachi bụ, "N'oge a anyị enweghị atụmatụ itinye gọọmentị US na ikpe a."